Ekuhlaziyeni Suv "Toyota Highlander"
Crossover "Toyota Highlander" inguqulo imodeli, imoto yohlobo lweToyota Kluger (umshini ekhaya emakethe of Japan). Imoto ekuqaleni lakhiwa American izimfuno emakethe, igama elihunyushwe kusho "mountaineer". "Toyota Highlander" usesikhundleni phakathi onobuhle ezifana RAV4 futhi 4Runner. Yena seziqalile ukusetshenziswa wakhe e-Chicago ngo-February 2000.
Ukubukeka isizukulwane sokuqala imoto okukhulunywa yakhelwe isitayela olandelanayo kakhulu, okuyilezi umklamo okunzima, original phambi yokukhanya, amaphiko "eqolo", amabhampa enamandla, roof rails, spoiler labaqaphi elingemuva. Ngenxa yalokho, imoto ubukeka kahle nangesibindi. A igunya sokuthuthukiswa steel zokuphepha nenduduzo. Ingaphakathi ivulekile (esihlalweni semoto esingemuva eseduze abantu abathathu), inala legroom - ngenxa ongaphakeme injini ukubekwa e endlwaneni eyakhiwe akukho Umhubhe bendiza, ngokulandelana, ezingeni phansi. amafasitela Wide ukunikeza umbono omuhle. Ekuqaleni, "Toyota Highlander" kwaba ifakwe i-automatic transmission 4-speed, njengoba inketho indlela ehlongozwayo usuke mathupha.
Imodeli lokuqala sesimanje kwenziwa ngo-2003. "Toyota Highlander" usezuze a bumper entsha bese Izinsimbi - manje libhekene Amabha omkhulu ovundlile. Esikhathini ingaphakathi kwakukhona amasondo ayo multifunction kakhulu, console isikhungo livuselelwe. Esikhundleni ezintathu-litre izinjini efakiwe lokubolekwa ivolumu 3.3 amalitha, ngokulandelana, kukhuphuke amandla (kufika ku 230 amalitha. P.) Futhi torque engu (kufika ku 323 Nm). I Suv has a front kanye bakhulise ngokugcwele ukumiswa ezimele, ukwehla McPherson strut nelungiselelo transverse samandla iyunithi.
"Toyota Highlander" (isithombe okufakiwe kuze kube ukunakwa kwakho, ukuvumela umbono inhloso mayelana isimangaliso Japanese embonini yezimoto) zihamba phambili e-United States. Ngakho, emakethe United States zaba ngaphezulu kuka ezintathu kwezine yokuthengisa ngo-2003, ezingafinyelela amakhophi angaphezu kuka-120 eziyinkulungwane.
Ngo-2004, iqembu Toyota unikezele ezimbili izinguqulo "Highlander": base phambi-wheel drive ne umthamo injini 2.4 amalitha no 160 amalitha. s., futhi inguqulo phezulu Kunomkhawulo ephethe umthamo we 3.3 amalitha. Lesi sakamuva is ngaphezu kwalokho ifakwe i-stereo uhlelo ezibizayo, ehlukile ukulawula isimo sezulu, uhlelo anti-theft, ngogesi ngaphambili izihlalo, ezine-wheel drive ukudluliswa nge ziyalingana isikhungo umehluko. Kusukela ngo-2004 kube bavele emakethe inguqulo hybrid "Highlander": nge yangaphakathi omlilo engine (3.3 l) kanye motor kagesi (umthamo isamba kuze kufinyelele 270 hp ..), With amasondo kagesi njalo. Model nge V emise eziyisithupha-cylinder ifakwe ezinhlanu-speed automatic transmission. Kuzo zonke ukuhlukahluka kusukela ngo-2004, leli sondo ezisele eyenziwe imithwalo kanye ibekwe phansi imoto.
Ngo-2008, ngesikhathi i-Chicago Auto Show ukubeka "Toyota Highlander" Isizukulwane sesibili. Crossover selikhule ngobukhulu, ayenakho izibani entsha ukuma okungavamile, ngesivuno nge-chrome strip ezansi, washintsha Izinsimbi. Ngaphezu kwalokho, anda phansi imvume ukuze 206 mm. Ingabe siye sashintsha ngokuphawulekayo ingaphakathi imoto: isikhumba ngombala, ukhuni umhlobiso, ezintathu-zone ekulawuleni isimo sezulu, umbala qapha, bakhulise umbono ikhamera, ipaki ukulawula ibanga, izihlalo ezifudumalayo, kagesi. Imodeli okukhulunywa ifakwe iqoqo ukuphepha yekwentiwa. Engine sithathelwe indawo V emise eziyisithupha cylinder ephethe umthamo we 3.5 amalitha no 273 amalitha. a. Transmission - othomathikhi, 5-ngesivinini.
Ngo-August 2010, DEBUT Suv kule nguqulo restyled, futhi waziwa ukuthi le mishini izonikelwa Russia. Imoto entsha akuyona okuningi ezahlukene kusukela "Highlander" isizukulwane sesibili. Kusekelwe chassis engasindi futhi yesikhulumi umgibeli. Akukho igiya isinyathelo-phansi, olunikezwa ukudluliswa sivala. Ukuhamba ugcwele, olinganiselayo. Faceted Izinsimbi eseqedile chromium. Side izibuko anemisila Ukushisa kagesi. I engavamile we crossovers "Russian" kukhona stiffer ukushaqeka wezinciphisi elikuvumela ukuba ngokuqiniseka ukuqondisa emigwaqeni yethu.
Akunjalo kudala, Toyota owethulwa kwesizukulwane sesithathu se-crossover, okuyinto imodeli entsha ngokuphelele. Car "Toyota Highlander" 2014 luhluke ezazingaphambi kwayo: yesimanje, original kanye umklamo omuhle, tech futhi ingaphakathi ivulekile, kungenzeka injini okukhethayo. Ngakho, umnikazi ezingase ukuthenga imoto ne iyunithi 2.5 amalitha noma 3.5 amalitha noma thatha hybrid 2.5 litre motor, plus 141 amalitha. a.
Kuyinto ongaziwa ukuthi kuyoba intengo Suv entsha, kodwa elithembisa umakhi, ibhalwa ithuba lokufunda esikhathini esizayo esiseduze.
Buyekeza entsha "Renault Koleos" - ukubuyekezwa kanye incazelo
SUV "Ataman" Gaz-2308: Uhlolojikelele, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Gaz-47 - emshinini ayidingi imigwaqo
Izici Technical we Nissan Qashqai futhi intengo uhlelo olusha crossovers 2014
"Toyota 4 Runner" - a crossover ngekusasa!
Ezulazulayo albatross: incazelo umsuka wegama elithi, yokuphila, ukukhahlamezeka kwendawo
Lionella Skirda: biography, filmography nokuphila komuntu siqu
Esifubeni olimele. Usizo lokuqala kanye Izindlela zokwelapha
Valery Komissarov - TV umethuli, umkhiqizi, sezombusazwe
Lac Oflomil: analogue, imiyalelo, izithombe
"The Mill" - uzivivinye isikhathi okhalweni amahle
Yini okufanele ibe iqoqo aziphumulele umzimba
Indlela ukudweba ebhishi nolwandle, usebenzisa ipensela kanye gouache
Indlela yokwenza utamatisi juice ekhaya: izindlela 2 namathiphu
Ukubeletha uma sebehlanganisa amasonto angu-38. Harbingers ezizalwa uma sebehlanganisa amasonto angu-38
Plaza of Spain aseRoma: isithombe, amahhotela, kanjani ukuze uthole